हरेक १० सेकेन्डमा मदिराको कारण एक जनाको मृत्यु : भयावह नतिजा - ज्ञानविज्ञान
रक्सी, जाँड, मदिरा यस्ता अनगिन्ती नाम छन् । जसले एउटै कुराको असर देखाउछ त्यो स्वास्थ्यमा हानी ।
ठेट भाषामा रक्सी, जाँड र अलि परिस्कृत शब्दमा मदिरा । पिता-पूर्खादेखि पिउँदै आएको पेय भनेर यसलाई हामीले निरन्तरता दिदै आएका छौं । मदिरा पिउनुलाई हामी ‘परम्परा’, ‘संस्कृति’ भनेर भ्रमित बनाउने चेष्टा गर्छौं ।
वास्तवमा मदिरा आफैमा संस्कृति होइन । मदिरा पिउनु सभ्यता होइन । मदिरा न स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ, न समाजका लागि । दुबैका लागि हानिकारक छ ।
यो त एक विकार हो । समाजलाई ध्वस्त बनाउने । मान्छेको मनोवृत्ति खराब बनाउने ।
मदिरा सबैभन्दा पुरानो नशालु पदार्थको रुपमा लिइन्छ । नशाजन्य पदार्थमा सर्वाधिक प्रयोग गर्ने वस्तु, हो मदिरा । तर, मानव स्वास्थ्यका लागि भने हानिकारक छ ।
मदिरा प्रयोगको मात्राले व्यक्ति र समाजलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । मदिराको अत्याधिक सेवनले संक्रमणीय रोगहरुका साथै सामाजिक सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने र आर्थिक रुपमा पनि हानी पुर्‍याउँछ । यसले शारीरिकदेखि कडा खालको मानसिक रोगसम्मको शिकार बनाउँछ :
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक १० सेकेन्डमा एक जना र प्रत्येक वर्ष ३३ लाख (३.३ मिलियन) मानिसले अत्यधिक मदिरा सेवनको कारण अकालमा ज्यान गुमाउने गर्छन् ।
यो विश्वको वार्षिक मृत्युको ५ दशमलब ९ प्रतिशत हो । विश्वमा लाग्ने रोगमध्ये ५ दशमलब १ प्रतिशत रोग मदिराको कारण लाग्ने गर्छ ।
२० देखि ३९ वर्ष उमेर समुहका २५ प्रतिशत व्यक्तिको मृत्यु अत्यधिक मदिरा सेवनको कारण हुने गरेेको अनुसन्धान बताउँछ ।
एक बर्षमा नियमित रक्सी सेवन गर्ने पुरुषले औसत २१.२ लिटर र महिलाले औषत ८.९ लिटर शुद्ध रक्सी प्रयोग गर्छन् । रुसका पुरुषहरुले औषत ३२ लिटर शुद्ध रक्सी प्रयोग गर्ने गरेको सन २०१० को विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक अध्ययनले देखाएको छ ।
– मदिराको बढी सेवनले स्वंय व्यक्तिलाई त असर पार्छ नै परिवारका सदस्य, साथी, सहकर्मी र अपरिचितमा समेत नकरात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यद्यपी वातावरण, आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक पक्षलगायतका कुराले मानिसलाई मदिरा सेवनको लागि प्रेरित गर्छ ।
– मानिसले जति अव्यवस्थित र नियमित मदिराको सेवन गर्दै जान्छ त्यतिनै मस्तिष्कमा पनि नकरात्मक असर पर्दै जान्छ । रगतमा रहेको मदिराको मात्राअनुसार मस्तिष्कमा असर पर्ने गर्छ ।
– अत्याधिक मदिरा सेवनले मानिसमा मानसिक विचलन, चोटपटक र विचार आदान प्रदान गर्न नसक्नेजस्ता समस्या ल्याउने गर्छ ।
– गलत तरिकाले मदिराको सेवन गर्दा २०० भन्दा वढि रोग लाग्ने गर्छ । मदिराको अत्याधिक सेवनले जन्डिस, अल्सर, टीबी, उदासीनता, चिन्ता, डर, बेहोसी, हातखुट्टा काप्नेदेखि कडाखालको मानसिक समस्या समेत हुन सक्छ ।
– मदिराको लत भएका मानिसले झट्ट अस्वीकार गर्ने बानी हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले अलि बढि आफ्नो प्रशंसा गर्ने र प्रतिवाद गर्छन् ।
– मदिरा सेवन गर्ने मानिसले सजिलैसँग झुटो बोल्छन् भने अरुमा अनावश्यक दोष थुपार्ने गर्छन् ।
– मदिरा बढी पिउने मानिसले सकभर मदिराको बारेमा कुरा गर्न रुचाउँदैनन् । बरु व्यवहारिक कुराकानीबाट गफ गर्न शुरु गर्छन् । कोहीसँगै एक्लै वा नजिकको साथीसँग मात्र मदिरा सेवनको बारेका कुरा गर्छन् ।
– मदिराको लत भएकाहरुलेे मदिरालाई नैतिकतासँग जोडेर कुरा गर्छन् ।
– रक्सी र अन्य लागूपदार्थको उपचार लिए पछि छिटै पुनरावृति हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
– मदिरा प्रयोगकर्ताको अवस्था र कारणअनुसार विभिन्न तरिकाले उपचार गरिन्छ । बिशेष गरी विषमुक्तिकरण, औषधी उपचार, मनोचिकित्सा, मनोविमर्श, व्यवहार परिवर्तन, बहुआयामिक पद्धति, पुर्नस्थापना केन्द्र आदिको माध्ययमबाट मदिराको लत छुटाउन सकिन्छ ।
– लत भएको व्यक्तिलाई छुटाउदा शुरुमा आत्तिने, नताव महसुष गर्ने, छटपटिने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा शारीरिक तथा मानसिक प्रतिक्रिया देखिने गर्छ । अत्याधिक पसिनो आउने पनि गर्छ ।
Topics #कुरुप मदिरा #मदिरा #मदिराको कारण एक जनाको मृत्यु
Don't Miss it बढ्दाे जाडाेका कारण जोर्नीको दुखाईबाट पिडित हुनुहुन्छ ? अाउनुहाेस् यति कुरा जाने घरमै गर्न सकिन्छ उपचार
Up Next नियमित व्यायामले हाम्रो स्वास्थयमा सुधार हुन्छ तर व्यायाम गर्न नजान्दा शरीरलाई हानी पनि पुर्याउछ
निर्भिक टक्सका दिमाग खियाउँने प्रश्नहरु भाग १० – के तपाई जवाफ दिन सक्नु हुन्छ ?
अधिकांश महिलाको शरीरका विभिन्न भागमा सेता धर्सा देखिन्छ । पेट, हिप, पिँडौला, स्तनआसपासको छालामा सेता धर्सा बाक्लै हुन्छन् । छालामा…
कथा : आमाको मायाको कुनै सिमा हुँदैन – एक पटक अवश्य पढ्नुहोला ( भिडियोसहित )
“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” आफूलाई जन्म दिने बाबुआमा भन्दा ठुलो यो संसारमा कोही हुँदैनन् । कवि भूपी शेरचनको यो उद्गारलाई…
स्वस्थ रहन केहि टिप्स
# रोग पालेर जिउन कति मुस्किल पर्छ भन्ने त दीर्घरोगीलाई बढी अनुभव हुन्छ । त्यसैले, स्वस्थ जीवनबारे वेलैमा सोचेको राम्रो…
दिनदिनै फलफुलकाे जुस पिउनु स्वास्थ्यका लागी हानीकारक
दिनदिनै सोडा पिउँदा तपाईंको तौल बढ्छ अनि क्यान्सरको पनि खतरा हुन्छ । तर सोडा जस्तै गरी फलफूलको जुस पनि दिनदिनै…
कुनैपनि प्रयास विना नै लगातार घटिरहनु भएको छ ? के कारणले यस्तो हुन्छ त ? जान्नुहोस
१. मधुमेह मधुमेह हुँदा भोक कम लाग्छ । यसको कारणले गर्दा व्यक्तिको शरीरमा सुगरको स्तर बढ्छ, जसले किड्नी र यसका…
शरीरलाई फाईदा हुन्छ, जाडोमा यस्ता खाना खानाले
– जाडोमा भिटामिन सी युक्त खानेकुरा जस्तै : अमला, अम्बा, सुन्तला, मौसम, कागति, मेवा, लट्टेको सााग, बन्दा आदि खानु फाईदामन…
थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न तुलसी खेती, कस्तो छ यसको व्यापार ?
कम समय र कम लागतमा राम्रो आम्दानीको विकल्पको खोजीमा रहेकाहरुका लागि मेडिसनल प्लान्ट (औषधीय गुण भएका वनस्पति) को खेती तथा…
पिपल एक फाइदा अनेक
रुघामर्की पीपलको पातको धूलोलाई पानीमा अलिकति मिश्री मिसाएर पिउँदा रुघामर्की ठीक हुन्छ । वर्षौंसम्म रुघाले सताएको मान्छेलाई पनि यस्तो काँढाले…
घरमै पाइन्छ छालामा एलर्जी भएको औषधि
कतिपय एलर्जीको उपचार चिकित्सकबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ घरेलु सामग्रीको प्रयोगबाट पनि एलर्जीमुक्त हुन सकिन्छ । शरीरमा नकारात्मक असर नगर्ने…